TV5 အသံလွှင့်များ Live Mayweather နှင့် Pacquiao တို့အကြား Live HD ကြိုတင်ထုတ်လွှင့်မှု AVIWEST ​​ဒီဂျစ်တယ်မိုဘိုင်းသတင်းစုဆောင်းမှုဖြေရှင်းချက် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AVIWEST ​​ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း Newsgathering ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Mayweather vs. Pacquiao ၏ TV5 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ HD ကို Pre-လွှမ်းခြုံ
AVIWEST ​​ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း Newsgathering ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Mayweather vs. Pacquiao ၏ TV5 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ HD ကို Pre-လွှမ်းခြုံ
တိုက်ရိုက်ကူးစက်သည့် DMNG PRO180, TV5 အသုံးချဖို့ HD အတွက်လေ့ကျင့်ရေးပွဲတွေထဲမှာ မှစ. ဗီဒီယိုကို Los Angeles မြို့ ဖိလစ်ပိုင်ကျော် 3G / 4G ကွန်ယက်နှင့် Las Vegas မှ
Saint-GRÉGOIRE, ပြင်သစ် - မေလ 26, 2015 - AVIWEST, ဗီဒီယိုအလှူငွေစနစ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် Las Vegas မှာမေလ2အပေါ်အရပျကိုလုယူသော Mayweather Pacquiao vs. လက်ဝှေ့ပွဲစဉ်၏ Pre-လွှမ်းခြုံသောထုတ်ပြန်ကြေညာ AVIWEST ​​ရဲ့ DMNG PRO180 3G / 4G ဗီဒီယိုက uplink စနစ်ကနေတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်ကြည့်ရှု။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း newsgathering ဖြေရှင်းချက်အသုံးပြုခြင်း, TV5 အပါအဝင်မျိုးစုံဖိလစျထုတ်လွှင့်, ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့တယ် HD 3G / 4G ကွန်ရက်များကျော်အားကစားဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဗွီဒီယိုကိုသိပ်သည်းကွန်ယက်ကိုအခြေအနေများရှိနေသော်လည်းသာလွန် signal ကိုအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်။ ကြိုတင်ကြည်လင်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးကိုအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဝှေ့ပွဲစဉ်များထဲမှဖို့သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းနှင့်သင်တန်းများလွှမ်းခြုံခံစားရန်ကြည့်ရှုအားဖွင့်နေစဉ်မြင့်မား, ခရီးဆောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဗီဒီယိုအလှူငွေဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်, အ DMNG PRO180 ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ HD အရည်အသွေး။
"မန်နီ Pacquiao သူ့အိမ်တိုင်းပြည်အတွက်အမျိုးသားရေးသူရဲကောင်း, ဖိလစ်ပိုင်စဉ်းစား, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူ့လေ့ကျင့်ရေးပြင်ဆင်မှုနှင့်နေ့စဉ်ဘဝစောင့်ကြည့်ဖို့ကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားရှိပါလိမ့်မယ်သိတယ်ဖြစ်ပါတယ် Los Angeles မြို့ကြိုတင်တိုက်ပွဲဖို့ Las Vegas မှာထံမှအဖြစ်အင်တာဗျူးများ။ အများအပြားထုတ်လွှင့်ပွဲစဉ်ကိုဖမ်းယူဖို့လက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကျနော်တို့အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ကွန်ရက်ကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းကြောင်းအဖြေတစ်ခုလိုအပ် "Bong မှအီးလိုပက်ဇ်, သတင်းအင်ဂျင်နီယာ, TV5 ၏ဦးခေါင်းကပြောပါသည်။ "AVIWEST ​​ရဲ့တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုမျိုးစပ်အလှူငွေပလက်ဖောင်းကလွယ်ကူအားကစားနယ်ပယ်တွင်၏တင်းကျပ်စွာနယ်နိမိတ်အတွင်းလှည့်ပတ်ရွှေ့ဖို့အောင်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်လျက်တည်ရှိအိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုကိုပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်, အ DMNG PRO180 ဖိလစ်ပိုင်တီဗီကြည့်ရှုသူများအတွက်တစ်ဦးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံကိုအာမခံ။ "
အဆိုပါ DMNG PRO180 High-ထိရောက်မှုထုံးစံအင်တင်နာသည် array နှစ်ခုက USB interfaces နှင့် built-in Wi-Fi ကို modem နှင့်အတူရှစ် 10G / 3G ပြည်တွင်းရေး modems အပါအဝင်ဆယ်လူလာဆက်သွယ်မှု,4အထိပါရှိပါတယ်။ AVIWEST ​​SafeStreams (R) နည်းပညာပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်း, DMNG PRO180 ပင်ခန့်မှန်းရခက်ဆယ်လူလာကွန်ရက်ကအခြေအနေများအလယ်၌တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transmission ကို၏ပေးပို့အာမခံထား။ တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ် TV264 တူသောထုတ်လွှင့်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းရန်ဖွတစ်ခု H.5 ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာတပ်ဆင်ထားကောင်းပါသည် HD အနည်းဆုံးနှောင့်နှေးနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအထိရောက်ဆုံးထုံးစံ၌ဗီဒီယိုကို။
SD က / ရှိမရှိ 1 ကီလိုဂရမ်အကြောင်းကိုအလေးချိန်အိတ်ဆောင် DMNG PRO180 အလွယ်တကူမဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်HD SDI, Analog စ, ဒါမှမဟုတ် HDMIနှင့် V-တောင်ပေါ်မှာ, ရွှေတောင်ပေါ်မှာ, ဒါမှမဟုတ် PAG ပြားကနေတဆင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် Touch-screen ကို interface ကိုတဆင့်အော်ပရေတာကိုအလွယ်တကူ configure နှင့်လည်ပတ်စနစ်အဖြစ် IFB ပြန်လာရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်စတူဒီယိုနှငျ့ဆကျသှယျနိုငျသညျ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဗီဒီယိုတစ်ခု uplink စနစ်ဖြင့်ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်, အ DMNG PRO သိသိသာသာစစ်ဆင်ရေး newsgathering တက်အမြန်နှုန်း။
"တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက် HD newsbreaks နှင့်ထိပ်တန်းသတင်းစဉ်အတွင်းထုတ်လွှင့်သင်တန်းနေရာကနေပစ်ခတ်သောကြောင့် TV5 အနေနဲ့အဆင့်မြင့်အလှူငွေပလက်ဖောင်းအသုံးပြုအရေးပါခဲ့ပါတယ် "Erwan Gasc, AVIWEST ​​မှာ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီ DMNG PRO signal ကိုပေးပို့ခိုင်ခံ့စေဖို့အတူတူရရှိနိုင်ကွန်ရက်များ bonding အလိုအလျောက် Real-time ကွန်ယက်ကိုစွမ်းရည် detect လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DMNG PRO ဖြေရှင်းချက်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဖိလစျရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုအဓိကဖြစ်ရပ်မှတက်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှု၏ဒုတိယလက်လွတ်မခံ။ "
AVIWEST ​​ရဲ့ DMNG PRO စီးရီး, နိုင်ငံတကာအမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံတီဗီလိုင်းများအားဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တပ်ဖြန့်ထားပြီး, ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာအော်ပရေတာ; နှင့်သတင်းအေဂျင်စီများ။
AVIWEST ​​နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.aviwest.com.
အကြောင်း TV5 (www.tv5.com.ph/)
TV5 ကွန်ယက်, Inc (ယခင် Associated အသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ / Credit: ABC ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လူသိများ) Mandaluyong စီးတီး, ဖိလစ်ပိုင်အခြေစိုက်ဖိလစ်ပိုင်ပိုင်မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူကဇွန်လ 1992, 19 အပေါ် Joaquin ကို "Chino" Roces ကတည်ထောင်ခဲ့သော Associated အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းပြန်လည်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အုပ်စုတစုဦးဆောင်သည့်အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီ, 1960 အတွက်နှောင်းပိုင်းအက်ဒွပ် Tan ကအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာဝါရင့်အားဖြင့်အကွက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။
လက်ရှိတွင်က MediaQuest Holdings က, Inc, စီးပွားရေးသူဌေးကြီး Manuel V. Pangilinan ဦးဆောင်သောဖိလစ်ပိုင် Long ကအဝေးသင်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီ၏အကျိုးရှိသောယုံကြည်မှုရန်ပုံငွေတစ်လုံးလုံးပိုင်လုပ်ငန်းခွဲနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။
၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတို့တွင်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များ TV5 နှင့် AksyonTV ပါ၏ ရေဒီယိုကွန်ယက်ကို Radyo5 92.3 သတင်းများ FM ရေ; ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများအရောင်များ, က Hyper နှင့်ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကို TV ဖိလစ်ပိုင်; နှင့်မီဒီယာတွင်ကျယ်စွာ TV4ME ဖိလစ်ပိုင်, TV5.com.ph, Sports5.ph နှင့် News5 နေရာတိုင်းမှာ။
အကြောင်း AVIWEST ​​(www.aviwest.com)
AVIWEST ​​ကပ်လျက်တည်ရှိ 3G / 4G ဆယ်လူလာကျော်တိုက်ရိုက်လွှင့်အဘို့ကိုဗီဒီယိုအလှူငွေစနစ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပြီး, ဂြိုဟ်တု ကွန်ရက်များ။ Saint-Grégoire, ပြင်သစ်ရုံးချုပ် AVIWEST ​​ထုတ်လွှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အထူးသဝေးလံခေါင်သီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ newsgathering ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမိုဘိုင်းဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရဒီဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း newsgathering ဖြေရှင်းချက်သတင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များလွှမ်းခြုံခြိုးဖောကျဘို့ 1 နိုင်ငံများထက် သာ. ဆင့်-60 ထုတ်လွှင့်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/AVIWEST/AVIWEST-DMNG_PRO.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: AVIWEST ​​DMNG PRO ဗီဒီယို uplink စနစ်
AVIWEST ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DMNG PRO တီဗီနည်းပညာ TV5 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-29
ယခင်: သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်က Ultra HD ဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်ဖို့ငရုတ်သီး, အီတလီရဲ့ဦးဆောင် OTT Service Provider, ဖွင့်မည်
နောက်တစ်ခု: နှစ်ဦးက New မိုဘိုင်း RF ယာဉ်များအတွက်က CP ဆက်သွယ်ရေးသွင်းယူမှုများ Barnfind BarnOne Fiber ပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများ